Göztepe Ümraniye Metro Hattı Çalışmaları Yeniden Başladı | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်Metro လိုင်း Goztepe Uskudar လေ့လာရေးပြန်လည်စတင်ပါ
20 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 34 အစ္စတန်ဘူလ်, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, မြို့ပြရထားစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, Metro, တူရကီ 0
goztepe umraniye မြေအောက်ရထားလိုင်းကို calismalari နောက်တဖန်စတင်
IMM ဥက္ကဋ္ဌ Ekrem İmamoğlu, 1 နှစ်ပေါင်းန်းကျင် built ရပ်, ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်၏ "Ümraniye-Flat-Goztepe မီထရိုလိုင်း" ပြန်လည်စတင်ခံရဖို့များကြောင့်တစ်ဦးအခမ်းအနားတွင်မိန့်မြွက်တော်မူ၏။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့မှအထောက်အကူဖြစ်စေမယ့်ဝန်ဆောင်မှုပေးလျှင် "ဒီတိုင်းပြည်မှာတော့နှင့်ဤမွို့၌ကိုဖန်ဆင်းမဆိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏တဦးတည်းတစ်ခုတည်းကိုင်ဆောင်သူ, ဖြစ်ဘယ်တော့မှဖြစ်လိမ့်မယ်" ဟုİmamoğlu "ဟုပြောသည်, ထိုအစ္စတန်ဘူလ်အများပြည်သူ၏တစ်ဦးတည်းသောပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကဒီနိုင်ငံရဲ့ဘတ်ဂျက်၏နားလည်မှုဖြစ်ကြသည်ဇာတ်ကောင်များ၏ပုံစံပိုင်ဆိုင်မှုများကိုစီမံခန့်ခွဲ; အကောင်းဆုံးစီမံကိန်းများ, စျေးအသက်သာဆုံးကုန်ကျစရိတ်ကအမြင့်မားဆုံးအရည်အသွေးထုတ်လုပ်အလုပ်ဖြည့်စွက်ဖို့လူမျိုးပိုင်သောသရုပ်ပြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့သည်ယနေ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်နေကြသည် Oden စောင့်ရှောက်မှု, ကအစ္စတန်ဘူလ်၏လူမျိုး၏လိမ္မာပါးနပ်ကပိုင်ဆိုင်သည်။ ငါတို့သည်အလုပ်ပြီးအောင်တဲ့အခါမှာအစ္စတန်ဘူလ်၏လူတွေကသူ့ကိုဂုဏ်ယူကြလိမ့်မည်။ တစ်ဦးချင်းစီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်၎င်း၏နိုင်ငံသားများ၏ပိုင်ရှင်။ ဘာပါတီတစ်ခုကာလကားအဘယ်သို့ရ, မကသောနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်, မဟုတ်သလိုအစိုးရတစ်ခုသို့မဟုတ်မြို့တော်ဝန်၏ဦးခေါင်းသည်။ ပိုင်ရှင်ကဒီမှာတည်ရှိသည်နှင့်ငါတို့လူမျိုး၏သန်းပေါင်းများစွာသည်မဟုတ်။ "
အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ် (IMM) ဥက္ကဋ္ဌ Ekrem İmamoğlu, 1 နှစ်ပေါင်းန်းကျင် built ရပ်, "Ümraniye-Flat-Goztepe မီထရိုလိုင်း" ဟုအဆိုပါဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်ပြန်လည်စတင်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။ အဆိုပါ IMM İmamoğlu Yavuz Erkut အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး Demir ၏လက်ထောက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးနှင့် Murat Orhan Shield ကိုရထားစနစ်များဒေါနရွက်Alpkök၏ဌာနမှူးများကလိုက်ပါသွားခဲ့ပါတယ်၏ပြန်လည်စတင်များအတွက်အခမ်းအနားမှာအလုပ်လုပ်။ 30 နှစ်ပေါင်းအကြောင်းကိုမြေအောက်၏ဆောက်လုပ်ရေးကိုအထောက်အကူပြုသောအဖွင့်ရှေ့တော်၌မိန့်ခွန်းတွင်İmamoğlu ", ကျောက်ပေါ်မှာကျောက်ခဲနှင့်ပစ်သွင်းထားဖို့ကြိုးစားနေ, အုပ်ချုပ်ရေးမှုးများနှင့်ဝန်ထမ်းကိုထည့်သွင်းဖို့နည်းပညာဆိုင်ရာလူများအတွက်သစ်တစ်ခုမှတ်တိုင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤဖြစ်စဉ်ကိုဆက်လက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့မြန်နှုန်းနှင့် ပတ်သက်. အရေးပါသင်တန်းရှိသည်။ ပိုများသောစီစဉ်ထားသောကြောင့်အရည်အချင်းပြည့်မီသောမြန်ဆန်ဖြစ်သင့်သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအလုပ်နှင့်အလုပ်သမားပြုမိသော်လည်း, သင်တန်း၏, ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အစ္စတန်ဘူလ် 233 ကီလိုမီတာမက်ထရိုလိုင်းအတွက်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်လက်ရှိတက်ကြွစွာ။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး 79 ဝန်ကြီးဌာနကျွန်တော်တို့ရဲ့İstanbul'umuzda်ထမ်းဆောင်ယင်း Marmaray ဖွဲ့စည်းရန်ကီလိုမီတာ။ 16 233 မွို့၌သန်းကီလိုမီတာအမှန်တကယ်တစ်ဦးအနိမ့်ပုံဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသိပ်မြင့်မားတဲ့အတွက်ဖြစ်ရပြီသငျ့သညျ။ 18 ရာခိုင်နှုန်းသာရှိသောကြောင့်အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်ရထားလမ်းစနစ်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏နှုန်းမှာ။ ကျနော်တို့အစအဦးမှာအလုပ်တွေအများကြီးနေကြတယ် "ဟုသူကပြောသည်။
"ကျနော်တို့ကအစ္စတန်ဘူလ် GO TO သို့နေရာ KNOW ရမယ်"
ကျနော်တို့ကဘက်စုံ event မှာရှာနေ "ထောက်လှမ်းအတွက်İmamoğlu" unplanned မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်လူဦးရေတိုးတက်မှုနှုန်းတစ်မြို့လည်းမရှိလြှငျ, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအလုံအလောက်မြေအောက်မြို့ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေကြောင်းလုပ်ပါလိမ့်မည် "။ ကျနော်တို့သေချာပေါက်ရှိရာအစ္စတန်ဘူလ်နှင့်ခိုင်ခံ့သောသွားဖို့ကိုသိမထားသင့်သော Metro ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု, နေစဉ်။ အားလုံးဒီဇိုင်းများဤမြို့ကိုအချို့ရှိရပါမည်။ တန်ဖိုးအရှိဆုံးဇာတ်ကောင်ဤကာလအတွင်းဖြစ်လိမ့်မည်, ဖော်ပြပါလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့ကပစ်မှတ် 2050 နှစ်ပေါင်းအဖြစ်ကိုယျ့ကိုယျကိုခန့်ထားပြီ။ အများကြီးစဉ်းစားဝေးကွာသော, ဒါပေမယ့်တကယ်တော့အတွက်အလွန်နီးကပ်လိုပဲ။ ကျနော်တို့ကအရမ်းစီစဉ်ထားကျနော်တို့အစ္စတန်ဘူလ်သိလိုလာမယ့်အချက်စီစဉ်အတွက်စေ့စပ်ဆက်ဆံပါ။ ဒါကြောင့်အကျင့်ကိုကျနော်တို့အစ္စတန်ဘူလ်လုပ်ငန်းစဉ်သို့အားလုံးသက်ဆိုင်သူများယူပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါထုတ်ကုန်ကိုလူအပေါင်းတို့၏ထုတ်ကုန်ဖြစ်လိမ့်မယ် "ဟုသူကပြောသည်။
"အစ္စတန်ဘူလ်, STEPS အတွက်ကို AT CHARACTER များ၏အနာဂတ်ပါလိမ့်မယ်ပတ်သတ်သော"
222 ကီလိုမီတာမြေအောက်အလုပ်အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်ဆက်လက်ဖြစ်ပါတယ်များ၏İmamoğluဝေစုက "ဤတွင်ဖြစ်ပါတယ်ပို့ဆောင်ရေး၏ရှယ်ယာကီလိုမီတာ 81 န်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။ IMM 141 ကီလိုမီတာမြေအောက်အလုပ်အားဖြင့်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဖြစ်ပါတယ်။ ကံမကောင်းစွာပဲကျနော်တို့စီမံကိန်း 8 တွေ့ရှိခဲ့ထိုကဲ့သို့သောGöztepe-Umraniye အညီအလုပ်လုပ်ကိုင်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 1 နှစ်သို့မဟုတ်ပိုရှည်စီမံကိန်းများဖြစ်ကြသည်ရပ်တန့်ပါပြီ။ ဒီအတှကျအကွောငျးရငျးမြားစှာရှိပါတယျ။ ရှေ့ဆက်ကျွန်တော်တို့ကိုတစ်တင်းကျပ်သောဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကိုသတိထားပါပါ၏ ဒါပေမယ့်အလွန်ကိုငါ့မိတ်ဆွေများကျူးလွန်ခဲ့သော။ အစ္စတန်ဘူလ်, ခိုင်ခံ့နှင့်တည်ငြိမ်တဲ့မြို့။ အစ္စတန်ဘူလ်ကမြို့ရဲ့အနာဂတ် contemplates အဖြစ်ခိုင်မာတဲ့ခြေလှမ်းများနှင့်ဇာတ်ကောင်နှင့်ပတ်သက်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများယူပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ရမညျသက်ဆိုင်သောဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းများအတွက်ပြဿနာ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းကိုကျော်လွှားကြပါပြီ, သြဂုတ်လအတွက်လက်မှတ်နှင့်အတူယူကြပြီ။ ပိုပြီး 1 အကြောင်းကိုထက်နှစ်ပေါင်းရပ်တည်မှုဒီ site လှုပ်ရှားကြလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒီမျဉ်းတှငျကြှနျုပျတို့ရှေ့ 2022 အတွက် finish ကိုမြင်နိုင်ပါသည်။ "
"ဟုအဆိုပါပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအစ္စတန်ဘူလ်၏ ONE OWNER က"
İmamoğluထည့်သွင်းဖို့ကတိပေးထားကြောင်းသောင်းချီအလုပ်သမားထောင်ပေါင်းများစွာအတွက်မြေအောက်အလုပ် 30 နှစ်ပေါင်း "Marmaray ကတစ်နှစ်အတွင်းစတင်ဘယ်လို xnumx'l ကျနော်တို့အလုပ်ကိုပြုပုံကိုငါသိ၏။ ဥပမာအားဖြင့်, ကျွန်တော်တစ်ဦးချောစီမံကိန်းအကြောင်းစကားပြောနေကြသည်နှောင်းပိုင်း Ecevit သမ္မတတူရကီကာလအရေအတွက်ကိုစဉ်အတွင်းစတင်ခဲ့သည်။ ဤတိုင်းပြည်နှင့်ဤမြို့ကိုအတွက်လုပ်မဆိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘယ်တော့မှတစ်ခုတည်းကိုင်ဆောင်သူဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုအလှူငွေပူဇော်ပါကအစ္စတန်ဘူလ်အများပြည်သူ၏တစ်ဦးတည်းသောပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ ထက်ကတခြား, မဘာတစ်ဦးချင်းတစ်ဦးပါတီချမှတ်ဘယ်တော့မှစစ်မှန်တဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုအလှူငွေပူဇော်ပါကအစ္စတန်ဘူလ်အများပြည်သူ၏တစ်ဦးတည်းသောပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကဒီနိုင်ငံရဲ့ဘတ်ဂျက်၏နားလည်မှုဖြစ်ကြသည်ဇာတ်ကောင်များ၏ပုံစံပိုင်ဆိုင်မှုများကိုစီမံခန့်ခွဲ; အကောင်းဆုံးစီမံကိန်းများ, စျေးအသက်သာဆုံးကုန်ကျစရိတ်ကအမြင့်မားဆုံးအရည်အသွေးထုတ်လုပ်အလုပ်ဖြည့်စွက်ဖို့လူမျိုးပိုင်သောသရုပ်ပြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့သည်ယနေ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်နေကြသည် Oden စောင့်ရှောက်မှု, ကအစ္စတန်ဘူလ်၏လူမျိုး၏လိမ္မာပါးနပ်ကပိုင်ဆိုင်သည်။ ငါတို့သည်အလုပ်ပြီးအောင်တဲ့အခါမှာအစ္စတန်ဘူလ်၏လူတွေကသူ့ကိုဂုဏ်ယူကြလိမ့်မည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်ကဒေသခံစီမံခန့်ခွဲမှုချဉ်းကပ်ကျနော်တို့ဆက်ဆက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဘို့ငါတို့အလားအလာတင်ထားတော်မူမည်, ဤဘက်လျက်။ တစ်ဦးချင်းစီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်၎င်း၏နိုင်ငံသားများ၏ပိုင်ရှင်။ ဘာပါတီတစ်ခုကာလကားအဘယ်သို့ရ, မကသောနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်, မဟုတ်သလိုအစိုးရတစ်ခုသို့မဟုတ်မြို့တော်ဝန်၏ဦးခေါင်းသည်။ ပိုင်ရှင်ကဒီမှာတည်ရှိသည်နှင့်ငါတို့လူမျိုး၏သန်းပေါင်းများစွာသည်မဟုတ် "သူတို့kullandı.imamoğlထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့, ထို့နောက်မိမိအကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရဲ့မိန့်ခွန်းမှသူ့ကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့," ဘုရားသခင်, သငျသညျအပေါငျးတို့သ ERD ပါပဲ။ မင်္ဂလာမင်္ဂလာ "ကျနော်တို့မပြီးဆုံးသေးသောမြေအောက်ရထားအလုပ်ကိုခလုတ်ကိုနှိပ်စတင်ခဲ့ပြီးခဲ့သည်ဆန္ဒရှိရှိမရှိ။
İmamoğluကိုလည်းအခမ်းအနားအပြီးသတင်းထောက်များ၏အစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းများကိုဖြေသည်။ İmamoğluအောက်ပါအတိုင်း IMM ၏နိုင်ငံတော်သမ္မတကပေးသောမေးခွန်းများကိုနှင့်အဖြေကိုမေးခဲ့တယ်:
"အနာဂတျ Going ... "
- တစ်ဝက်တစ်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းပွင့်လင်းထားခဲ့တယ်။ လုံးဝသူတို့ကိုဖျက်သိမ်းရေးနှင့်ကျနော်တို့စက်ရုံတည်ဆောက်ရေးအကျင့်ကိုကျင့်အပေါ်လေ့လာမှုတစ်ခုလုပ်စီမံခန့်ခွဲ။ ငါ့အဆွေခင်ပွန်းဒီမှာ Two-ဇာတ်စင်ဖြစ်စဉ်ကိုစီမံခန့်ခွဲရသည်။ ပထမဦးစွာသူတို့ကဒီခြိမ်းခြောက်မှုဖယ်ရှားပစ်ချင်တယ်။ ဤတွင်သူတို့အမှန်တကယ်လမ်းပိုကောင်းရယူပါ။ ကျနော်တို့အထူးသဖြင့်အစ္စတန်ဘူလ်၏ခေတ်ဒီကျဆုံးခြင်းနှင့်အချိန်သည်ဆောင်းကာလကတည်းကသူမ၏အဆင်ပြေစေပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်ဤမလုံလောကျပါပဲ။ ကျနော်တို့ fixed မြေအောက်ရထားလိုင်းများအတွက်ဆက်လက်ရှိသည်။ ပုံသေမြေအောက်ရထားလိုင်းများနှင့် ပတ်သက်. ကဒီမှာယူခြေလှမ်းများတစ်ခုမှာဂျ။ အခြားသူများကိုတင်းကျပ်စွာအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားပြောဆိုမှုဆက်လက်နေကြသည်။ တလမ်းတည်းဖြင့်အဖွဲ့အစည်းများ - ထိုအကျင့်ကိုကျင့်ကန်ထရိုက်တာများကဖြေရှင်းမရ။ လောလောဆယျအလုပ်အကိုင်များပမာဏအကြောင်းပြောနေတာနေတာ, ကတော်တော်မြင့်မားသောငွေပမာဏရှိပါတယ်။ အဆိုပါစီမံကိန်းအားအားကြီးသောကြွေးမြီ-based လိုအပ်ပါသည်။ ဒီသဘောနဲ့ကျနော်တို့ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများအားဖြင့်နှစ်ဦးစလုံးသည်အခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူလာရန်ကန်ထရိုက်တာစကားပြောနေကြသည်။ ရလဒ်အဖြစ်ကျနော်တို့ဒီနေ့သူတို့ထဲကတစ်ဦးရှိသည်။ အနာဂတ်မှာပိုပြီးဖတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်, တကယ်တော့, ထိုအမှုသည်ချိန်းလိုင်း -very စပ်စု၏ရှိသမျှတို့, ကျောက်စာများတွင်ဖြစ်ပါတယ် - Mahmutbey ရဲ့မီထရိုလိုင်းစီမံကိန်းကိုကဲ့သို့ xnumx'n အချိန်ဇယားဆွဲ၏ဇန်နဝါရီလ-ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းတိုးတက်မှုကွန်ကရစ်အပေါ်အပြီးသတ်ဖို့ပါပဲ။ တီးဝိုင်းအတွက် fixed လိုင်းများနှင့်ပတ်သက်သောကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက် 2020-2022 အဆိုပါပြီးစီးခဲ့အကောင်အထည်ဖော်မှုအပေါငျးတို့သပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ ခြေလှမ်းဘဝအားဖြင့်အဆင့်ပေါ်သွားသည်နှင့်ရဲ့အစ္စတန်ဘူလ်၏ရလဒ်အဖြစ်kavuştukနှစ်ဦးစလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့သူချင်းနိုင်ငံသားနှင့်အတူသင်နှင့်အတူကောင်းမွန်သောဤသတင်းအားမျှဝေပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုအယူအဆများ၏သဘောပေါက်၏အသေးစိတျပေးရကွန်ကရစ်သတင်းအချက်အလက်မရှိပါ။
- ငါအပြောင်းအလဲမြန်စတင်ဖြစ်စဉ်ကိုစဉ်းစားပါ။ တင်ဒါခေါ်, အဆိုပါစီမံကိန်းကိုပြုနေသည်ဖြစ်နိုင်ခြေပြု, သင်တန်း, ဒါပေမဲ့အတူတူဒီဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်းစဉ်သည်နှင့်အတူငွေကြေးအစီအစဉ်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ဒါဟာအရင်းအမြစ်မှတဆင့်ကူးစက်သောလျှင်တစ်ဦးငွေချေးအရင်းအမြစ်များ, ခွဲဝေသို့မဟုတ်လျှင်။ ဒါပေမဲ့ဒီမှာအများကြီးစီမံကိန်းများ၏ဒီဇိုင်းအဘို့ဖြစ်၏ 2017 နှင့် 2017 ရဲ့အဆုံးမှာရပ်တန့်ရမည် 2018 အတွက်စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ 1-2 လအနည်းငယ်စည်းရုံးခြင်းအားထုတ်မှုခဲ့ပေမယ့်ပြန်တော့ဘူး။ စုစုပေါင်းကံမကောင်း, ထိုကဲ့သို့သောတစ်ခုရလဒ်ကိုပြီးခဲ့သည့်နှစ်က 2-3 ဒီဇိုင်းရောဂါအကြောင်းကိုရှိပါတယ်။ ဒီအခိုက်မှာ 30 နှစ်ရဲ့အကြောင်းဝန်ခံပါစို့ 150 ယနေ့အတွက်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ Marmaray မြေအောက်ကီလိုမီတာ saymazsak- ကျွန်တော်တစ်ဦးနိဂုံးချုပ်ရောက်ရှိလျှင်တကယ်တော့, ဒီကံမကောင်းတဲ့အောင်မြင်မှုမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ဟာမြင့်မားတဲ့မိုင်အကွာအဝေးမပြောတတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ငါအလိုရှိ၏။ ငါသူတို့ 18-40 ၏ပြောနေတာနိုင်, မြေအောက်ရထားပို့ဆောင်ရေးအတွက်ရာခိုင်နှုန်းကိုရှယ်ယာ xnumx'lik မဟုတ်အလိုရှိ၏။ ဒါပေမဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါဘူး။ ဒီပြီးခဲ့သည့်နှစ်က 50-2 compressed အလုပ်ကပိုအတိတ်တွင်စီစဉ်ထားတကယ်တော့ဤအရာများကိုလွတ်ကြပြီသငျ့သညျ။ ဤသည်ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းပေါ်တွင်တစ်ခါတစ်ရံသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဦးစားပေး, related တစ်ခွအေနအေမူဝါဒများတစ်မြို့, တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းမက်ထရိုများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဦးစားပေး။ ဒါကြောင့်သေချာပေါက်အားဖြင့်ရှေ့ပြေးကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုလှည့်သောနောက်, ဒါပေမယ့်တည်ငြိမ်ကျန်းမာခြေလှမ်းများယူခြင်းအားဖြင့်, ထိုကန်ထရိုက်တာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်မကျန်အာကာသထွက်ခွာကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းအပေါ်ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။
တစ်ဦးကနေ့ရွေ့လျော့မည် 350 THOUSAND ခရီးသည်
မျဉ်း 350 ဖွင့်လှစ်တဲ့အခါမှာတစ်နေ့လျှင်တထောင်ခရီးသည် Goztepe ဘူတာသွားရောက်ပါလိမ့်မယ် Halkalıအဆိုပါ Surface က Metro လိုင်း -Gebz; Kadikoy-Kartal မီထရိုလိုင်းTavşantepeကနေ New ကို Sub-Station ကို; Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy / Sancaktepe ထံမှဇားဘူတာက Metro လိုင်းများ၏ပေါင်းစည်းမှုကိုသေချာစေရန်။ ဘူတာအကြား 11 13 ကီလိုမီတာနှင့်အတူKadıköy, Maltepe နှင့်လိုင်းအရှည် Umraniye ခရိုင်ရှိလိမ့်မည်။ 20 မိနစ်စဉ်ခရီးအချိန်, တဦးတည်း-လမ်းရှေ့ခရီးသည်တင်စွမ်းရည် 31 တထောင်အဖြစ်ရှုမြင်သည်။ လိုင်းက start နှင့်အဆုံးဘူတာ, Göztepe 60 ။ တစ်နှစ်တာ Park နှင့် Umraniye Kazım Karabekir ရပ်ကွက်ဖြစ်လိမ့်မည်။
Ümraniye Flat Göztepeမီထရိုဘူတာလုပ်ငန်းစတင် 14 / 08 / 2017 Üstanbul၏ Anatolian Side တွင်တည်ဆောက်နေသောÜmraniye-Ataşehir-Göztepe Metro ၏Göztepeဘူတာရုံ၏ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နေဆဲဖြစ်သည်။ Göztepe 60 အတွင်းဘူတာရုံတည်ဆောက်ခြင်း။ ယခုနှစ်ပန်းခြံ၏တင်းနစ်ကွင်းများကိုယာယီဆောက်လုပ်ရေးနေရာအဖြစ်အသုံးပြုလိမ့်မည်။ ကနေအလုပ်လုပ် ...
flat Göztepeအစ္စတန်ဘူလ်-Ümraniye-to-ပြုပါနယူးက Metro line break 22 / 10 / 2015 Göztepe-Ümraniye-Ataşehirနှင့် Istanbul တို့အကြား metro လိုင်းအသစ်တစ်ခုတည်ဆောက်မည်ဖြစ်သည်။ İstanbulမြို့ပြမြူနီစီပယ်ဌာန၏စစ်တမ်းနှင့်စီမံကိန်းများက Groztepe, Ataşehirနှင့်Ümraniyeလမ်းဆုံမှာ metro line ကိုတည်ဆောက်မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ ဘဏ္centersာရေးစင်တာများ…
အဆိုပါဝန်ကြီးဌာနကထံမှGöztepe-Flat-Umraniye မီထရိုလိုင်းစီမံကိန်းကိုခွင့်ပြုချက် 29 / 10 / 2015 ၀ န်ကြီးဌာနမှGöztepe-Ataşehir-Ümraniye Metro Line စီမံကိန်းမှခွင့်ပြုချက် - Istanbul Metropolitan Municipality သည်Göztepe-Ataşehir-Ümraniye Metro Line စီမံကိန်းအတွက်ယခုလအတွင်းလျှောက်ထားခဲ့သည်။ 11 ဘူတာကိုစီစဉ်မည့်Göztepe-Ataşehir-Ümraniye Metro Line စီမံကိန်းကို ၀ န်ကြီးဌာနမှအတည်ပြုပြီး ... …
Metro လိုင်း Goztepe-Flat-Ümraniyeကနေလူတိုင်းတိုင်ကြား 09 / 08 / 2018 Göztepe-Ataşehir-Ümraniye Metro လိုင်းကိုဆောက်လုပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ သူတို့၏မြေများကိုဖြတ်သန်းသွားသောမြေအောက်ရထားလမ်းကြောင့်တန်ဖိုးနည်းသွားသောကုမ္ပဏီများကိုလည်းမက်ထရိုကိုမေးမြန်းကြသည်
Göztepe - Flat - ယခုနှစ် 2016 Umraniye Metro စီမံကိန်းဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါ၏ပထမဦးဆုံးဝက်အတွင်းကျင်းပလိမ့်မည် 02 / 11 / 2015 Goztepe - Atasehir - Umraniye Metro Project ဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါကိုယခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်တွင်တင်သွင်းမည်ဟု 2016 Istanbul မြို့ပြမြူနီစီပယ်မြို့တော်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်း ဦး စီးဌာန“ Goztepe - Atasehir - …
Göztepe - Flat - ယခုနှစ် 2016 Umraniye Metro စီမံကိန်းဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါ၏ပထမဦးဆုံးဝက်အတွင်းကျင်းပလိမ့်မည်
Üsküdar - Umraniye - မက်ထရိုယာဉ်များÇekmeköyမီထရိုလိုင်းစီမံကိန်း 126 စုစုပေါင်းဝယ်ယူမှုနုသတ်မှတ်ချက်များ၏ကြိုတင်အလုပ်ဆက်လက်ဖြစ်ပါတယ်
Ümraniye - မက်ထရိုယာဉ်များÇekmeköyမီထရိုလိုင်းစီမံကိန်း 126 စုစုပေါင်းဝယ်ယူမှုနုသတ်မှတ်ချက်များ၏ကြိုတင်အလုပ်ဆက်လက်ဖြစ်ပါတယ်
Üsküdar - Umraniye - Çekmeköyမီထရိုလိုင်းစီမံကိန်းသတ်မှတ်ချက်မက်ထရိုယာဉ်များတင်ဒါ၏ကြိုတင်အလုပ် 126 အပိုင်းပိုင်းပြီးစီး၏စင်မြင့်ဆီသို့ရောက် လာ. ,